पूजा शर्माको आक्रोश : पत्रकारले यति अशिष्ट शब्द बोल्न मिल्छ ? – Sandesh Munch
उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘के पत्रकारले यस्तो अशिष्ट, अभद्र र अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ ? पत्रकारले गर्न सक्ला मानौं, के टेलिभिजनमा यस्ता असभ्य कुराहरु सम्पादन गर्ने कुनै निकाय छैन ? हरेक ट्रोलको शिकारदेखि यस्तो अभद्र व्यवहारप्रति हामी कलाकार सधैं मौन नै रहनुपर्ने ? अहिले आएर उहाँले मैले कसैको नाम तोकेको छैन भनेर पन्छिन मिल्छ ? यो ढंगको प्रस्तुतीकरणले के पत्रकारिताको इज्जत बढ्छ ?’onlinekhabar
Nextकार दुर्घटना हुँदा चालकसहित ३ जनाको मृ*त्यु ,एकजना घा*इते